Publishers - myOpenware
Join the LARGEST publisher network in Myanmar
myOpenAds က မြန်မာပြည်ရဲ့ online ကြော်ငြာ အများဆုံးထည့်ပေးနိုင်တဲ့ ad network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်တွင်းပြည်ပမှ website ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကြော်ငြာတွေကို ထည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ်ကြော်ငြာအကွက်ပေါင်း သိန်း ၁,၀၀၀ ကျော်ကို နိုင်ငံခြားနှင့် မြန်မာကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ publisher တွေအတွက် လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိအောင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ad network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ website မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြော်ငြာများကို ထည့်သွင်းပြသပေးခြင်းအားဖြင့် online မှ ဝင်ငွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသည့် website ပိ်ုင်ရှင်များကတော့ ဖုန်း ၀၁-၃၇၃၁၄၉ နှင့် ၀၁-၁၂၂၀၇၅၉ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေသည့် website တွေထဲမှ တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို အောက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Myanmar Mobiles Market
Nit Sann Thit
Tet Lann Jounral
Myanmar Mobile App and many more…
myOpenAds server more than 25 millions impressions per month from our publisher sites generating millions of Kyats for website owners.
Relevant Ads and trustworthy partner
You haveaweb site and you want to Monetize? Or you want to increase revenue? We are here to help you to achive more revenue and relevant ads.
Here are some of our publishers…
If you areawebsite owner, and want to earn money online, please get in touch with us today.